I-Smart Blackboard, i-Interactive Whiteboard, i-Interative Flat Panel - EIBOARD
Nge-brand ye-EIBOARD, FC, FCJYBOARD kunye ne-OEM, sisebenza ngokukhethekileyo kwiimveliso ezisebenzayo zezemfundo kunye nezoshishino, ukwenza umboniso ube lula kwaye ube lula.
Umenzi ophezulu kunye nomboneleli we-OEM yeebhodi zokuchukumisa ezihlakaniphile kunye neziboniso.
Iimveliso zethu eziphambili ziquka ibhodi yebhodi erekhodiweyo ekhokelwayo, isikrini esichukumisayo esisebenzayo, iphaneli yenkomfa esebenzayo, ibhodi emhlophe edibeneyo, i-multimedia yonke kwi-PC enye, i-multimedia yonke-in-one, i-terminal esebenzayo, ikhamera yoxwebhu, i-laser projektha kunye ne-smart touch ehambelana nayo. bonisa iimveliso.
I-LED Recordable Smart Whiteboard
Ukusuka kwiimveliso ukuya kwiinkonzo ukunika abathengi amava akumgangatho ogqibeleleyo
Iqela le-R&D elomeleleyo nelinamava lisebenza ekuphuhliseni iimveliso ezintsha kunye nophuculo oluxabisekileyo lonke ixesha, i-OEM kunye ne-ODM yamkelwe.
Ngaphezulu kwe-10000 m2 indawo yokuvelisa kunye nemigca yemveliso ye-2, umthamo wenyanga wenyanga ungaphezulu kweeyunithi ze-20000 zeepaneli zokuthintela kunye neebhodi.
Zonke iimveliso ziqinisekisiwe ngomgangatho we-ISO. Ngenkqubo yomgangatho wenkqubo yoxanduva-kumntu, amasebe e-2 e-QC aqinisekisa i-100% yokukhangela ngelixa inkqubo yonke.
Kuthengiswe iiyunithi ezili-100000+ kwihlabathi jikelele minyaka le, kusetyenziswana namahlakani angama-200+ e-OEM brand, abonelela ngezisombululo ngokuthe ngqo kumaziko emfundo angama-500+ kunye neeprojekthi zikarhulumente ezingama-50+.
Ukuqhubela phambili kwetekhnoloji yenkomfa yevidiyo